Taa, a na-ewere onye na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ ahụ maka ihe karịrị afọ 20 dị ka ụkọ. Ọtụtụ ndị na-esi n'ụlọ ha na-achụso òkè dị mma karị, nke a bụkwa eziokwu karịsịa maka ógbè, mana ndị bi na nnukwu megacities na-agagharị site n'otu ụlọ ọrụ gaa na nke ọzọ, na-emezigharị ikike ha na ịkwalite ọkwa ọrụ, na-ahapụkwa mba ha mgbe niile. Ebe a ga-aga ọrụ, a ga-agwa gị n'isiokwu a.
Ebee ka m nwere ike ịga rụọ ọrụ na obodo m?
Ọ bụghị ihe nzuzo na mmadụ n'otu ọnọdụ ahụ nwere ụgwọ dị iche iche na mpụta na n'obodo ukwu. Ya mere, ndị gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ dị elu ma ghara ime atụmatụ inwe afọ ojuju na ụmụntakịrị na-ahapụ obodo ha wee pụọ maka mpaghara kacha nso nke mpaghara ma ọ bụ obodo. Nsogbu bụ na n'enweghị ahụmahụ, a pụghị ịdọrọ ha gaa ebe dị mma, n'ihi ya ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịrụ ọrụ n'ụlọ ruo oge ụfọdụ, wee pụọ. Mmasị, ebe ọ ka mma ịga ọrụ n'enweghị agụmakwụkwọ ka elu , ọ bara uru ịtụle obodo ukwu dị mkpa maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ - ndị na-ewu ụlọ, ndị ọkwọ ụgbọala, ndị ọrụ nchịkwa, na ihe ndị ọzọ.
Ma ihe ka ukwuu ha na-akwụ mgbe niile na mpaghara ugwu, n'ihi na ịrụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ ndị siri ike a agaghị akwụ ụgwọ ntakịrị. Ebe kachasị chọọ na ebe bara uru bụ ụlọ ọrụ mmanụ na gas. Ọ bụrụ na enwere nkuzi profaịlụ, a na-ahụ ọrụ mgbe niile, ma ọbụna ndị ọkwọ ụgbọala nkịtị nwere ike ijikwa njikwa nke ngwá ọrụ pụrụ iche ma nweta ezi ego maka ọrụ ha.
Ebee ka m ga-arụ ọrụ ná mba ọzọ?
N'ọtụtụ mba, e mepụtara mmemme zuru ezu iji dọta ndị ọkachamara n'ọhịa nke nkà mmụta sayensị, sayensị, na nkà na ụzụ ọhụrụ. Ha dị njikere ịkwado akụkụ ahụ site na ha nyocha na ọzụzụ asụsụ. Ndị a gụnyere United States, Canada, Nigeria, Guinea, ọtụtụ mba Europe. Ma ọbụna ndị ọkachamara na-erughị eru nwere ike imeta ọtụtụ mba ọzọ karịa n'ụlọ. Ndị nwere mmasị n'ebe ha ga-esi nweta ego maka nwanyị nwere ike ịkwado ya na Ịtali, ebe a chọrọ nnukwu ndị ọrụ - ndị nọọsụ, ndị na-edozi isi, ndị na-elekọta ụmụ nwoke, na ndị ọzọ.
Ndị bi n'ógbè ahụ anaghị achọ ịrụ ọrụ n'ubi nhicha, n'ihi ya, ọrụ nke onye na-ehicha ihe n'ebe ahụ nwere ike ịchọta mgbe niile. Ma ọ bụ gaa na mkpụrụ osisi ihe ubi na mkpụrụ osisi na mba nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ - France, Italy, Spain, wdg. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịmata asụsụ mba ọzọ, ọbụna na-ekwu okwu mkparịta ụka, kwadebe maka ihe isi ike, na iji chee ebe ọ ga-arụ ọrụ.
Izi ede na ideghari
Kedu otu esi emeghe ụlọ ahịa kọfị site n'ịgba?
Kedu otu esi ebi ndụ n'usoro aku na uba?
Olee otu esi eme ego n'ulo?
Echiche nke ndu
Kedu ka esi ghọọ onye ngosi TV?
Beyonce yi uwe sari na kpakpando na Coldplay
Nnukwu cardigan cardigan
Michael Jackson weghaara ndepụta nke kpakpando nwụrụ anwụ kachasị ụgwọ
Ụlọ ọrụ Feng Shui
"Hụ na Ụlọ Nche"
Socks na akpụkpọ ụkwụ
Mmanụ Tui - Ngwa
Uwe mara mma maka ụmụ nwanyị
Jiri aka aka na-eji ibo ụzọ mechie ọnụ ụzọ
Kedu ka esi ghee ike na frying pan?
Mgbọrọgwụ ginger - contraindications
Iko maka whiskey